Obbo Lidatuu Ayyaaleewu hidhaa baatiiwwanii booda wabii qarshii 30,000n gadhiifaman – AMBO TV
11 Muddee 2020
Obbo Lidatu Ayyaaleewu hidhaa baatiiwwaniin booda wabii maallaqaatiin mana hidhaatii bahusaanii Dura taa’aan Paartii Dimokiraasummaa Itoophiyaanootaa Obbo Adaanaa Taaddasaa BBCtti himan.
Manni murtii Waliigalaa Oromiyaa dhaddacha bahaa kan magaalaa Adaamaatti argamu namni siyaasaa Obbo Lidatuu Ayyaalewu wabii qarshii 30,000n gadi dhiifamanii dhimma isaanii alaa akka hordofan murteessu abbookaatoon isaanii BBCtti himan.
Dhimmi isaani har’atti beellamamee kan ture himannaan heeraa fi sirna heeraa mootummaa diiguu jedhu amma dura irratti banamee ture fooyya’ee akka dhiyaatuuf ajaja kenne ilaaluuf ture jedhu abukaatoo Obbo Lidatuu keessaa tokko Obbo Abduljabbaar Huseen.
Abbootiin alangaa himannoo fooyya’e mana murtiif erga dhiyeessanii booda, abukaatonni falmii himannicharratti qaban dhageesisanii dabalataan Obbo Lidatuuf mirgi wabii akka eegamu gaafachuu himu Obbo Abduljabbaar.
Bu’uuruma kanaan manni murtii wabii qarshii 30,000 qabsiisanii dhimma isaanii alaa hordofuu akka danda’an murteessuu himu.
Abbootiin Alangaa akka kanaan duraa mirga wabii gaafatame hin mormine jedhan.
Ammatti maallaqa gaafatame kafalaa akka jiraniifi waaree booda naannoo sa’aa saddeetii gadi dhiifamu jedhanii akka eegan pireezidantiin Paartii Dimokiraatawaa Itoophiyaa Obbo Adaane Taaddese BBC’tti himaniiru.
Obbo Lidatuu Ayyaaleewu amma dura irra deddeebiin mirgi wabii eegamuufillee poolisiin gadi dhiisuu didaa ture.
Obbo Lidatuun Adoolessa darbe hokkora ajjeechaa artiist Haacaaluu Hundeessaa hordofee uumameen wal qabatee rakkoo magaalaa Bishooftuu keessatti uumameen shakkamuun ture to’annoo jala kan oolan.
Jalqaba hokkora magaalaa Bishooftuu keessa ture qindeessuu fi maallaqaan deeggaruun shakkamanii kan to’ataman yoo ta’u booda himati meeshaa seeraan alaa qabachuu jedhu irratti dhiyaateera.
Himata kanaan manni murtii mirga wabiin akka bahan erga murteesseen booda Onkoloolessa darbe poolisiin himannaa sanaan gadi dhiifamuu fi himannaa biraa heeraa fi sirna heeraa diiguu jedhuun to’annoo jala ooluu Obbo Lidatuu beeksisee ture.
Previous Post‘ፍልስጤማውያንን አያገለግልም’: እስራኤል-ሞሮኮ ግንኙነታቸውን መደበኛ ለማድረግ
Next PostEU delays €90 million in aid to Ethiopia over Tigray crisis